Kasbashada & Isdhexgalka - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Xafiiska Guusha iyo Isdhexgalka-Shaqada iyo U Diyaarsanaanta Kulliyadaha Robbinsdale Area Schools ayaa mas'uul ka ah wax ka qabashada arrimaha ku saabsan jinsiyadda iyo sinnaanta degmada oo dhan iyadoo ujeedadu tahay inay noqoto degmo dugsi ka madax bannaan midab-kala sooca hay'adaha iyo sinnaan la'aanta.
Himilada Dugsiyada Robbinsdale Area waa inay dhiirrigeliso oo waxbarto dhammaan ardayda si ay u ogaadaan kartidooda oo ay si togan ugu biiriyaan bulshadooda. \_
Hadafkani wuxuu horseedayaa yoolalka soo socda:
In la kobciyo lana dardar galiyo gaaritaanka tacliinta
Sii tayo sare leh, ka qaybgal waxbaris iyo caqabado kasta oo arday ah
Kordhi jawi waxbarasho oo lagu garto ixtiraam labada dhinac ah iyo masuuliyad shaqsiyadeed
Xoojinta xiriirka ardayda, shaqaalaha, qoysaska iyo xubnaha bulshada
Kordhi ilaha oo muuji isla xisaabtan maaliyadeed
Qaab dhismeedka Isbadalka Sinaanta ee Degmada Robbinsdale Area waxaa loogu talagalay in lagu xaliyo arrimaha ku saabsan jinsiyada iyo sinaanta dhamaan degmada si loo dhiso hay'ad ka madax banaan midab kala sooca hay'adaha iyo sinaan la'aanta.
Caddaynta in qorshahu shaqaynayo wuxuu ku salaysnaan doonaa afar doorsoomayaal muhiim ah oo si toos ah ula xiriira guddiga ujeeddooyinka waxbarashada:
Guusha waxbarasho, sida lagu cabiray xogta laxiriira farqiga udhaxeeya hada guusha iyo waxyaabaha kale ee xogta.
Dareenka lahaanshaha, sida lagu cabiray sahanka ra'yiga ardayda degmada iyo waxyaabaha kale ee xogta.
Helitaanka iyo ka-qaybgalka koorsooyinka / barnaamijyada adag iyo barnaamijyada manhajka ka-baxsan iyo kuwa dheeri ah, sida lagu qiyaaso xogta ka-qaybgalka dadka iyo waxyaabaha kale ee xogta.
Dhaqanka hay'adaha oo ka madax banaan saamayn aan kala go 'lahayn oo ku saabsan kooxo gaar ah oo dad ah sida lagu qiyaaso qiimaynta baahiyaha iyo xogta qiimaynta ee ay soo ururiyaan kooxaha sinaanta iyo waaxda cilmi baadhista, qiimaynta iyo qiimaynta.
Himilada Sinnaanta ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxaa ka mid ah:
Carruurta jinsiyadaha kala duwan, dhaqanka iyo dakhliga waxay ku guuleystaan dugsiga waxayna ku gaaraan heerar sare.
Jawiga iskuulka iyo fasalka ayaa loo hagaajiyay dhamaan ardayda iyo shaqaalaha.
Yoolalka Sinnaanta ee Dugsiyada Robbinsdale waa:
Kordhi Fahamka Dhaqanka
Macalimiinta Aqoonta Dhaqanka & Manhajka Dhaqamada Kala Duwan
Sinnaanta Helitaanka & Fursadda
Kordhinta Kala Duwanaanta Shaqaalaha, Qaabaynta & Hanuuninta
Ka Qaybgalka Waalidiinta & Awoodsiinta
Fahamka & Taageerada Bulshada
Khibradaha Cilmi-baarista ee Ardayda Dugsiga Sare
Waaxda Kasbashada & Isdhexgalka waxay ardayda dugsiga sare u soo bandhigtaa Khibrado Cilmi-baaris ah sannad kasta. Ardaydu waa inay maraan nidaamka dalabka si loogu aqbalo Khibrada.
Khibradda Cilmi-baarista Xuquuqda Madaniga ah Afrikaan-Mareykan
Khibradda Cilmi-baarista Xuquuqda Hindida Mareykanka
Khibradda Cilmi-baarista Xuquuqda Madaniga ah (CRRE) waxaa loogu talagalay inay siiso ardayda iyo shaqaalaha Afrikaanka Ameerikaanka ah waxbarasho dhow, taariikheed iyo khibrad dhacdooyin badan intii lagu jiray Dhaqdhaqaaqa Xuquuqda Madaniga ah ee ka caawiyay qaabeynta iyo qeexidda Mareykanka. Khibraddan goobta waxay ka badan tahay booqashada - waxay ka caawineysaa horumarinta xirfadaha cilmi-baarista ee muhiimka ah, taas oo lagama maarmaanka u ah tacliinta sare iyo helitaanka shahaadada sare, iyo sidoo kale xoojinta xirfadaha fekerka muhiimka ah. CRRE waxay ku xujeysaa ardayda inay ka faa’iideystaan fikradaha fikradaha ah ayna ku dabaqaan khibrada barashada Xuquuqda Madaniga ah iyagoo ka hadlaya arrimaha sida raasamaalnimada, cunsuriyada, dhaqdhaqaaqa bulshada, u dhaqdhaqaaqa ardayda, barashada adeegga iyo awooda siyaasadeed ee lagu barto shaqada koorsooyinka ama khibradaha nool. Ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan ayaa ah in la abuuro is-aqoonsi iyo manhaj ku saleysan u doodid taas oo lagu baran karo dhallinteena ku dhex jirta dugsiyada.
In kasta oo socdaalku ku lug leeyahay koox yar (oo hadalladeedu yar tahay) oo arday iyo shaqaale ah, faa'iidada ayaa taabanaysa bulshada oo dhan. Ardayda kaqeyb qaadata waxay la wadaagaan khibradooda, waxayna soo bandhigaan macluumaad iyo aragtiyo ay ku kasbadeen horumarinta ilaha degmada oo dhan iyo soo bandhigida dugsiyada hoose, dhexe, iyo sare, oo ay weheliyaan maamulka iyo xubnaha guddiga iskuulka. Tan ugu muhiimsan, ardayda waxay adeegsadaan xirfadahooda cilmi baarista si ay uga caawiyaan dib u qeexida sida Xuquuqda Madaniga ah loo bari doono loona baran doono mustaqbalka.
Hone xirfadaha cilmi-baarista ee muhiimka ah
Fahmaan sida go'aanka taariikhiga ah ee Maxkamadda Sare ee Brown iyo Guddiga Waxbarashada iyo maalgelinta is-dhexgalka ay saameyn ugu yeelaneyso barashada ardayda dhigata dugsiyada aagga
Waxbadan ka baro Xuquuqda Rayidka
Khibrad u leh Xuquuqda Madaniga iyo goobaha dhaqdhaqaaqa awooda Madow
Ku xir qaabdhismeedka fikradeed khibradaha wax ku oolka ah ee maalinlaha ah (laga bilaabo fasalka illaa nolosha)
Ku xidho guulaha taariikhda iyo halganka halganka maalinlaha ah ee la xidhiidha iyo guulaha
Baro dhaqdhaqaaqa ardayda iyo dhaqdhaqaaqa bulshada
Ka qaybgal barashada adeegga
Adeegso xirfado soo bandhigid oo wax ku ool ah, oo ay ku jiraan sameynta filim
Raadi taariikhda, doorka, iyo xiriirka kulleejooyinka taariikhiga ah ee Madow iyo Jaamacadaha (HBCU) iyo Dhaqdhaqaaqa Xuquuqda Madaniga
Iyada oo loo marayo afarta maalmood ee usbuuca ee bisha Maajo (Bisha Hindida Mareykanka), ardayda la xushay ee Indian Indian ah ee dugsiga sare waxay la kulmi doonaan taariikhda iyo aqoonta Hindida Mareykanka iyagoo u maraya booqasho ku teedsan Minnesota. Khibradda Cilmi-baarista waxay dhisi doontaa xoog, waxay dhiirrigelineysaa awood-siin iyo dhiirigelin adkeysi
Khibradda Cilmi-baarista ee caadiga ah, ardaydu waxay booqdaan:
Oday dhaqameedyada, hogaamiyaasha, iyo dadka ku hadla
Goobaha dhaqan ahaan muhiimka ah
Ururada wadaniga ah
Waxbarashada Hindida Mareykanka
Barnaamijka Waxbarashada Hindida wuxuu u adeegaa ardayda Hindida Mareykanka ah iyadoo horumarinaysa fahamkooda iyo qaddarinta taariikhdooda iyo dhaqanka Hindida Mareykanka. Himiladayadu waa inaan u xaqiijino ardayda inay gaaraan aqoonta, xirfadaha iyo dabeecadaha loo baahan yahay si loo xaqiijiyo kartidooda, loola kulmo caqabadaha xulashooyinkooda nololeed iyo in la buuxiyo waajibaadkooda maadaama ay ardaydu salka ku hayaan qaab nololeedka asaliga ah.
Barnaamijka Waxbarashada Hindida, oo ay federaalku maalgeliso, waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo waalidiinta iyo qoysaska si loo daboolo baahiyaha waxbarasho iyo dhaqan ee gaarka ah ee ardayda Hindida Mareykanka ah. Adeegyada Barnaamijka Waxbarashada Hindida waxaa ka mid ah:
Dhaqdhaqaaqyada Khuseeya Dhaqanka iyo Safarada Goobta
Caawinta iyo Tacliinta Tacliinta
Habeenada Dhaqanka Bisha
Diyaarinta Dugsiga Sare kadib
Taageerada Kooxda Waxbarashada Gaarka ah
Macluumaadka ku saabsan ilaha bulshada (maalgelinta waxqabadka dugsiga, iwm.)
Shaxda Luqadaha Dakota iyo Ojibwe
Khibradda Xuquuqda Cilmi-baarista Hindida Mareykanka (AIRRE)
Dabaaldegga Guusha Gu'ga
Bixiyaan agab dhaqan ahaan sax ah iyo casharro laxiriira macallimiinta fasalka (Dhaqanka Dhaqanka)
Naga soo hel Facebook oo iska qor joornaalkayaga elektarooniga ah .
Guddiga Waalidiinta Waxbarashada Robbinsdale
Qabiilooyinka Mareykanka ee Asalka ah
Kheyraadka Dhaqanka iyo Taariikhda Dhaladka Mareykanka
Qof Hindi Hindi Mareykan ah oo u qalma waa mid ka mid ah kuwan soo socda:
Xubin ka tirsan qabiil ama koox Hindi ah, oo ay ku jiraan kuwa Hindida ah ama kooxihii joojiyay ilaa 1940, iyo kuwa ay aqoonsan tahay gobolka ay ku nool yihiin qabiilka ama kooxdu.
Farac ka soo jeeda heerka koowaad ama labaad (waalid ama awoowe) sida lagu sharaxay # 1.
Waxaa loo tixgeliyey Xoghayaha Arimaha Gudaha inuu yahay Hindi ujeedo kasta ha noqotee.
Eskimo ama Aleut ama Dhalad kale oo Alaska ah.
Xubin ka tirsan koox Hindi ah oo abaabulan oo deeq ka helay sida ku xusan Sharciga Waxbarashada Hindida ee 1988 maadaama ay dhaqan gashay Oktoobar 19, 1994.
Si loo codsado deeqda qaaciddada ee hoos timaada Xafiiska Waxbarashada Hindida, Dugsiyada Aagga Robbinsdale waa inay marka hore go'aamiyaan tirada ardayda Hindida Mareykanka ah ee dhigata dugsiyadeeda iyadoo qoysaskaas ay ka buuxinayaan Foom 506 ah. Qoysaska looma baahna inay buuxiyaan foomka 506; si kastaba ha noqotee, haddii aad doorato inaadan soo gudbin foom, degmadu kuma xisaabtami karto ardaygaaga maalgelinta barnaamijka. Foomamka 506 waxaa lagu hayaa Barnaamijka Waxbarashada Hindida waana qarsoodi.
Foomamka loo baahan yahay
Guddiga Waalidiinta Waxbarashada Robbinsdale waa koox heegan u ah waalidiinta, ayeeyooyinka iyo ayeeyooyinka iyo daryeelayaasha ardayda Hindida Mareykanka ah. Ardayda dugsiga sare ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay kaqeyb qaataan. Guddiga Waalidiinta wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan labo waalid / daryeele, hal macalin iyo hal arday oo dhigta dugsiga sare.
Waalidiinta Hindida Mareykanka ah waxaa si adag loogu dhiirigelinayaa inay door firfircoon ka qaataan waxbarashada ilmahooda iyagoo u maraya guddigan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto guddiga, fadlan la xiriir kooxda Waxbarashada Hindida Mareykanka adoo wacaya 763-504-8066.
Guddiga Waalidiinta Waxbarashada Robbinsdale Indian waxay kulmaan dhowr jeer sanad dugsiyeedka oo dhan Xarunta Adeegga Waxbarashada. Guddigu wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo hubin lahaa qorshaynta, horumarinta, hirgelinta, iyo qiimeynta barnaamijyada hawlgalka iyo kaabista ee loogu talagalay ardayda Hindida Mareykanka ah ee dhigata Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Guddiga wuxuu u adeegaa xiriir muhiim ah oo ka dhexeeya bulshada Hindida Mareykanka iyo Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Guddiga Waalidiinta Waxbarashada Robbinsdale Indian waxaa lagu aasaasay si waafaqsan Sharciga Waxbarashada Hindida. Xafiiska Waxbarashada Hindida wuxuu liis garayaa Doorka Guddiyada Waalidka iyo Mas'uuliyadaha .
Lake Red: www.redlakenation.org
Mille Lacs: Kooxda Mille Lacs ee Ojibwe
Dunida Cad: www.whiteearth.com
Hoose Sioux: www.lowersioux.com
Sioux Sare: www.uppersiouxcommunity-nsn.gov
Jasiiradda Prairie: www.prairieisland.org
Taariikhda Guud ee Dhaladka Mareykanka
Matxafka Qaranka ee Hindida Mareykanka
Dhaqanka iyo Luqadda Mareykanka Dhaladka ah
Minnesota Chippewa Tribe , oo ka kooban Bois Forte, Fond du Lac, Grand Portage, Leech Lake, Mille Lacs, iyo Boos celinta White Earth, waa dowlad federaal ah oo la aqoonsan yahay oo, iyada oo loo marayo hoggaan mideysan, kor u qaadaysa oo ilaalineysa xubnaha Kooxda iyadoo la siinayo tayo adeegyada iyo kaalmada farsamo ee dawladaha boos celinta iyo dadka qabaa'ilka ah.
Aninishinaabe (Ojibwe) Dhaqanka iyo Taariikhda
Dhaqanka iyo Taariikhda Oceti Sakowin (Dakota, Lakota)
Hoos waxaa ku yaal liiska Dakota, Lakota, wakaaladaha qabaa'ilka ee Nakota iyo boos celinta iyo sidoo kale xiriiriyeyaasha taariikhda iyo dhaqanka.
Oglala Sioux Qabiilka
Qabiilka Cheyenne River Sioux
Joogtada Rock Sioux Tribe
Ruuxa Lake Sioux Nation
Beesha Mendota Mdewakanton Dakota
Bulshada Hindida ee Jasiiradda Prairie
Dagaalkii Dakota ee Mareykanka 1862
Xerada Oceti Sakowin
Waaxda Waxbarashada Hindida ee Minnesota
Shuruudihii la raaciyey oo lagu daray Xeerarka Minnesota, qaybaha 124D.861 iyo 124D.862 iyo sidoo kale Xeerarka Minnesota 3535.0100-0180, Qorshaha Gaaritaanka & Isdhexgalka ee Degmadu wuxuu ku xiran yahay xagga hoose.
A chievement & Qorshaha Isdhexgalka